Ismacil Hurre Buubaa: Hadilmee muxuu ahaa, shirka Garowe lama mid aha shirarki Nairobi iyo Muqdisho | Moment Union Somali Diaspora
25.December.2011:- Wasiirkii hore wasaarada arimaha dibada dowlada KMG Somaliya Ismacil Hurre Buubaa ayaa sheegay in shirka magalada Garowe lagu gabagabeeyay uu ka duwan yahay shirarkii hore ugu dhacay magaaloyinka Nairobi iyo Muqdisho.
Mudane Ismacil Hurre Buubaa oo haatan ah siyaasi weyn oo u dhun daloola arimaha Somaliya ayaa waxa uu sheegay in qodobada kasoo baxay shirka wadatashiga ee Garoowe uu yahay qodob aad u muhiim ah oo shirarkii hore lagu arag.
Mar uu wareysi kooban siinayay idaacada laanta Af-somaliga ee VOA-da ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in ay mudantahay in qodobada shirka muhiimad gooni ah la siiyo, maadaama buu yiri qodobada kasoo baxay ay yihiin kuwo wax ku ool ah.
” aniga waxa ay ila tahay Ha dilmee muxuu ahaa shirka wadatashiga Garowe kusoo dhamaaday iyo qodobada laga soo saaray iney yihiin Hadilmee muxuu ahaa qodobo muhiim ah oo mudnaan gaar leh inla siiyo u baahan”.
” waan usoo wada joognay shirarki ka dhacay Hadilmee muxuu ahaa Nairobi iyo Muqdisho kama aysan soo bixin natiijo dhaxal gal lakin Hadilmee muxuu ahaa shirkan Garowe qodobo la qaadan karo ayaa kasoo baxay”.
” Tusaale ahaan 500 xildhibaan waa cadad aad u tiro badan, 225 marka laga dhigo waa tiro xadidan oo aad u wanagsan, tirada barlamaanka haatan jira ma’ahan tiro la aqbali karo, iyadoo Road Map-ka la marayo waa in marka hore dib u habeyn lagu sameeyaa Hadilmee muxuu ahaa barlamaanka” ayuu yiri Siyaasi Buubaa.
Ismacil Hurre Buubaa ayaa walaac ka muujiyay sida lagu dhaqan galin karo qodobka ah in golaha barlamaanka la yareeyo, maadaama buu yiri ay jiraan tiro badan oo shirka Garowe kasoo horjeeda.
” Hadilmee muxuu ahaa qodobada Garowe waa kuwa wanagsan lakin sidee lagu dhaqan galinayaa, Hadilmee muxuu ahaa waxaa jira xildhibaano badan oo shirka Garowe kasoo horjeeda”.
Inkastoo muddo 4 sano soo socoto xildhibaanada lagu soo xulayo qaabka awood qeybsiga ah ee Afar Dhibic Shan(4.5) ayaa hadana isa soo taraya eedeymaha loo jeedinayo shirka Garowe.